Ujeedada Kumandoska Maraykanka Howlgalkii ay ku qaadeen Al-Shabaab ee Sh/hoose oo la ogaday – Balcad.com Teyteyleey
Ujeedada Kumandoska Maraykanka Howlgalkii ay ku qaadeen Al-Shabaab ee Sh/hoose oo la ogaday
Shabakadda Wararka Looking for an economic opportunity for your Finax purchase? We provide you the opportunity to buy it only for 1.24 USD at our store! ee Waaxda Arrimaha Dibedda Maraykanka ee Abaalmarinta Caddaaladda (the Rewards for Justice) ayaa lagu daabacay inay Komaandooska Maraykanka ka qeyb galeen Hawlgal ka dhacay Deegaanka D/Salaam ee Gobalka Sh/hoose.
Maryakanka ayaa Warbixinta ku sheegay in Hawlgalkaasi la doonayey in lagu soo qabto Ku-xigeenka Hoggaamiyaha Al-Shabaab, C/raxmaan Maxamed Warsame oo lagu naanayso Mahad Karatee, iyadoo Maraykanka horey u dul dhigay ninkaasi abaal marin Lacageed oo dhan 5 million oo Dollar ku bixinayaan ciddii keenta Warbixin horseedi karta in la soo xiro Mahad Karatee.
Dhanka kale Websaytka Waaxda Arrimaha Dibedda Maraykanka ayaa qoray inuu Mahad Karate ku lug lahaa Weerarkii Jaamacadda Garissa lagu qaaday bishii April 2-deedii ee sannadkii 22015-kii, oo ay ku geeriyoodeen 150-qof.
Bishaaro, Bacshuush iyo Bushi.
War deg deg ah: Al-Shabaab oo Gowracday laba asakari oo ka tirsanaa Ciidamada Dowaladda (Magacyada Askartaasi)